Vatongi 20 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
20 Naizvozvo vanakomana vose vaIsraeri vakabuda+ uye ungano yacho yakaungana pamwe chete+ pamberi paJehovha kuMizpa+, kubvira kuDhani+ kusvikira kuBheeri-shebha+ pamwe chete nenyika yeGiriyedhi.+ 2 Nokudaro varume vaikosha vevanhu vose nemadzinza ose aIsraeri vakamira muungano yevanhu vaMwari wechokwadi,+ varume zviuru mazana mana vaifamba netsoka vaivhomora bakatwa.+ 3 Zvino vanakomana vaBhenjamini vakanzwa kuti vanakomana vaIsraeri vakanga vaenda kuMizpa.+ Vanakomana vaIsraeri vakabva vati: “Taurai. Chinhu ichi chakaipa chakaitwa sei?”+ 4 Murume wacho, muRevhi,+ murume womukadzi akanga apondwa, akapindura akati: “Ndakasvika kuGibhiya,+ raBhenjamini, ini nomurongo wangu,+ kuti tirare ikoko. 5 Varidzi venyika yeGibhiya vakasimuka kuti vandirwise uye kuti vakombe imba vandirwise usiku. Ndini wavaironga kuuraya, asi murongo wangu ndiye wavakabata chibharo,+ akazofa.+ 6 Nokudaro ndakabata murongo wangu ndikamucheka-cheka ndikamutumira munyika yose yenhaka yaIsraeri,+ nokuti vakanga vasina kuzvibata+ uye vaita chinhu choupenzi chinonyadzisa pakati paIsraeri.+ 7 Tarirai! Imi mose vanakomana vaIsraeri, taurai shoko renyu nezano+ pano.” 8 Naizvozvo vanhu vose vakasimuka pamwe chete,+ vachiti: “Hapana kana mumwe chete wedu achaenda kutende rake, uyewo hapana kana mumwe wedu achatsaukira kumba kwake.+ 9 Zvino ichi ndicho chinhu chatichaitira Gibhiya. Handei kwariri tambokanda mujenya+ tirirwise. 10 Tichatora varume gumi pazana pamadzinza ose aIsraeri, uye zana pachiuru, uye chiuru pazviuru gumi, kuti vawanire vanhu mbuva, kuti vaite chimwe chinhu nokuenda kunorwa neGibhiya yaBhenjamini, nokuda kwezvinhu zvose zvoupenzi zvinonyadzisa+ zvavakaita pakati paIsraeri.” 11 Nokudaro varume vose vaIsraeri vakaunganira guta racho pamwe chete, vakabatana. 12 Naizvozvo madzinza aIsraeri akatumira varume kuvanhu vose vedzinza raBhenjamini,+ achiti: “Chinhu ichi chakaipa chakaitwa pakati penyu chii?+ 13 Zvino tipei varume vacho,+ vanhu pasina,+ vari muGibhiya,+ kuti tivauraye,+ uye ngatibvisei zvakaipa pakati paIsraeri.”+ Asi vanakomana vaBhenjamini havana kuda kuteerera inzwi rehama dzavo, ivo vanakomana vaIsraeri.+ 14 Vanakomana vaBhenjamini vakabva vaungana kuGibhiya vachibva mumaguta kuti varwe nevanakomana vaIsraeri. 15 Naizvozvo vanakomana vaBhenjamini vakaungana pazuva iroro vachibva mumaguta, varume zviuru makumi maviri nezvitanhatu vaivhomora bakatwa,+ tisingabatanidzi vagari vomuGibhiya, avo vane varume vakasarudzwa mazana manomwe vakaungana. 16 Pavanhu vose ava paiva nevarume mazana manomwe vakasarudzwa vaishandisa ruboshwe.+ Mumwe nomumwe waivava aipotsera matombo nechipfuramabwe+ zvokugona kurova rubvudzi uye aisapotsa. 17 Varume vaIsraeri vakaungana tisingabatanidzi Bhenjamini, varume zviuru mazana mana vaivhomora bakatwa.+ Mumwe nomumwe waivava aiva murume wehondo. 18 Vakasimuka, vakaramba vachienda kuBheteri kunobvunza Mwari.+ Vanakomana vaIsraeri vakabva vati: “Ndiani wedu anofanira kuenda achitungamirira kunorwa nevanakomana vaBhenjamini?”+ Jehovha akati: “Judha ngaatungamire.”+ 19 Pashure paizvozvo vanakomana vaIsraeri vakamuka mangwanani, vakadzika musasa kuti varwe neGibhiya. 20 Zvino varume vaIsraeri vakabuda kunorwa naBhenjamini; varume vaIsraeri vakagadzirira kurwa navo kuGibhiya. 21 Naizvozvo vanakomana vaBhenjamini vakabuda muGibhiya,+ vakaparadza vachiwisira pasi varume zviuru makumi maviri nezviviri pakati paIsraeri zuva iroro.+ 22 Zvisinei, vanhu, ivo varume vaIsraeri, vakaratidza kuti vakashinga, vakagadzirirazve kurwa munzvimbo yavakanga vagadzirira pazuva rokutanga. 23 Vanakomana vaIsraeri vakabva vaenda, vakasvimha misodzi+ pamberi paJehovha kusvikira manheru, vakabvunza Jehovha vachiti: “Ndiswederezve kuti ndirwe nevanakomana vaBhenjamini hama yangu here?”+ Jehovha akati: “Enda unorwa naye.” 24 Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakaswedera pedyo nevanakomana vaBhenjamini pazuva rechipiri. + 25 VaBhenjamini vakabudawo muGibhiya kuti vanosangana navo pazuva rechipiri, vakaparadzazve vachiwisira pasi vamwe varume zviuru gumi nezvisere pavanakomana vaIsraeri,+ vose ava vaivhomora bakatwa.+ 26 Vanakomana vose vaIsraeri,+ ivo vanhu vose, vakaenda vakasvika kuBheteri, vakasvimha misodzi+ vakagara ipapo pamberi paJehovha, vakatsanya+ zuva iroro kusvikira manheru, vakapa zvinopiwa zvinopiswa+ nezvinopiwa zvokugoverana+ pamberi paJehovha. 27 Pashure paizvozvo vanakomana vaIsraeri vakabvunza Jehovha,+ areka yesungano+ yaMwari wechokwadi zvayaiva ipapo mazuva iwayo. 28 Zvino Finiyasi+ mwanakomana waEriyezari, mwanakomana waAroni, akanga akamira pamberi payo mazuva iwayo,+ achiti: “Ndibudezve here ndinorwa nevanakomana vaBhenjamini hama yangu kana kuti ndirege?”+ Jehovha akati: “Enda, nokuti mangwana ndichamuisa muruoko rwako.”+ 29 VaIsraeri vakaisa vanhu kuti vavandire+ Gibhiya kumativi ose. 30 Zvino vanakomana vaIsraeri vakaenda kunorwa nevanakomana vaBhenjamini pazuva rechitatu, vakagadzirira kurwa neGibhiya sezvavaiita pane dzimwe nguva.+ 31 Vanakomana vaBhenjamini pavakabuda kunosangana nevanhu vacho, vakaendeswa kure neguta.+ Sezvavaiita pane dzimwe nguva, vakabva vatanga kurwisa vamwe vanhu vakavakuvadza zvokufa mumigwagwa mikuru, mumwe wacho unoenda kuBheteri+ uye mumwe kuGibhiya,+ musango, varume vanenge makumi matatu pakati paIsraeri.+ 32 Naizvozvo vanakomana vaBhenjamini vakatanga kuti: “Vari kukundwa pamberi pedu sezvavakaita pakutanga.”+ Asi vanakomana vaIsraeri, vakati: “Ngatitizei,+ uye tichavaendesa kure neguta kumigwagwa mikuru.” 33 Varume vose vaIsraeri vakasimuka munzvimbo dzavo, vakagadzirira paBhaari-tamari, vaya vaIsraeri vakanga vakavandira+ pavaibuda vachimhanya vachibva munzvimbo dzavo dzaiva pedyo neGibhiya.+ 34 Nokudaro varume zviuru gumi vakasarudzwa pakati pevaIsraeri vose vakasvika pamberi peGibhiya, uye kurwa kwacho kwakanga kuri kukuru; vaBhenjamini havana kuziva kuti dambudziko+ rakanga riri kuvasvikira. 35 Jehovha akakunda Bhenjamini+ pamberi paIsraeri, zvokuti vanakomana vaIsraeri zuva iroro vakaparadza varume zviuru makumi maviri nezvishanu nezana rimwe chete pakati paBhenjamini, vose ava vaivhomora bakatwa.+ 36 Zvisinei, vanakomana vaBhenjamini vakafunga kuti varume vaIsraeri vakanga vakundwa pavakaramba vachitiza+ Bhenjamini nokuti vaivimba nevaiva vakavandira vavakanga vaisa kuti varwe neGibhiya. 37 Zvino vakanga vakavandira vakakurumidza, vakamhanyira kuGibhiya.+ Vakanga vakavandira+ vakabva vapararira, vakauraya guta rose nomuromo webakatwa.+ 38 Zvino varume vaIsraeri vakanga varonga nevakanga vakavandira kuti vakwidze chiratidzo choutsi chichibva muguta.+ 39 Vanakomana vaIsraeri pavakatendeuka pakurwa, Bhenjamini akatanga kurwisa varume makumi matatu pavarume vaIsraeri akavakuvadza zvokufa,+ nokuti vakati: “Chokwadi vari kukundwa pamberi pedu sepakurwa kwokutanga.”+ 40 Chiratidzo+ chakatanga kukwira chichibva muguta seshongwe youtsi.+ Naizvozvo Bhenjamini paakacheuka, tarira! guta rose rakati togo mudenga.+ 41 Varume vaIsraeri vakatendeuka,+ varume vaBhenjamini vakanetseka,+ nokuti vakaona kuti dambudziko rakanga ravasvikira.+ 42 Nokudaro vakatendeuka pamberi pevarume vaIsraeri vakananga kurenje, hondo yacho ikati namename navo, varume vaibuda mumaguta pavakanga vachivaparadza pakati pavo. 43 Ivo vakakomba vaBhenjamini.+ Vakavatevera vasingavapi nzvimbo yokuzororera.+ Vakavatsika-tsika pamberi peGibhiya+ chaipo nechokumabvazuva. 44 Pakazofa varume vaBhenjamini zviuru gumi nezvisere, vose ava vari varume vakashinga.+ 45 Nokudaro vakatendeuka, vakatizira kurenje kuibwe reRimoni.+ Vakaunganidza varume zviuru zvishanu vavo vakasara mumigwagwa mikuru,+ vakaramba vakati namename navo kusvikira kuGidhomu zvokuti vakauraya vamwe varume vavo zviuru zviviri. 46 Vose vaya vaBhenjamini vakafa zuva iroro vakapedzisira vava varume zviuru makumi maviri nezvishanu vaivhomora bakatwa,+ vose ava vari varume vakashinga. 47 Asi varume mazana matanhatu vakatendeuka, vakatizira kurenje kuibwe reRimoni, vakaramba vachigara paibwe reRimoni+ kwemwedzi mina. 48 Varume vaIsraeri vakadzoka kuzorwa nevanakomana vaBhenjamini, vakauraya vaya veguta racho nomuromo webakatwa, kubvira kuvanhu kusvikira kuzvipfuwo kusvikira kuzvose zvakawanikwa.+ Vakapisawo nomoto maguta ose akawanikwa.+